avy amin'i Tammy Tkach - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Kristiana maro no milaza fa mifehy Andriamanitra ary manana drafitra ho an'ny fiainantsika. Izay rehetra mitranga amintsika dia ao anatin'io drafitra io. Ny sasany aza dia miady hevitra fa Andriamanitra dia mikarakara antsika rehetra mandritra ny andro, anisan'izany ireo hetsika manahirana. Afaka manafaka anao ve izany eritreritra izany fa Andriamanitra dia manomana isa-minitra amin'ny fiainanao ho anao, sa manosotra ny handrinao amin'ny io hevitra io toa ahy? Tsy nomeny safidy malalaka ve isika? Tena misy ve ny fanapahan-kevitsika sa tsia? Mino aho fa ny valiny dia miorina amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Miara-miasa foana izy ireo ary tsy miankina amin'ny tsirairay. «Ny teny nolazaiko taminao, tsy miteny azy aho ...
Andalana nataon'i TAMMY TKACH
Eo amin'ny faribolan'ny tany no nipetrahany; ary izay monina eo aminy dia tahaka ny valala; mamelatra ny lanitra tahaka ny voaly Izy ary mamelatra azy tahaka ny lay izay itoeran'ny olona iray; Nasehony ny andriana fa tsinontsinona izy, ary nopotehiny ny mpitsara teto an-tany: Raha vao nambolena izy ireo, dia saiky tsy namafy izy ireo, raha vantany vao miorim-paka amin'ny tany ny vatan'izy ireo, dia nokapohiny izy ireo ka nalazo. tsofy izy ireo ny rivodoza dia mitondra azy ireo toy ny akofa. Midika ve izany fa "valala" fotsiny isika dia tsy misy dikany amin'Andriamanitra loatra? Mety ho manan-danja amin'ny olona matanjaka toy izany koa ve isika?
Ny toko faha-40 amin'ny Isaia dia mampiseho amintsika ny mahatsikaiky amin'ny fampitahana ny olona amin'ilay Andriamanitra lehibe: “Iza no nahary ireo? Izay mamoaka ny tafiny araka ny isany sy miantso azy rehetra amin'ny anarany avy. Lehibe tokoa ny hareny ary mahery tokoa izy ka tsy misy tsy ampy tsy ampy "(Is 40,26).
Io toko io ihany koa dia miresaka amin'Andriamanitra momba ny ...
Efa noheverinao ve fa takatra ny zava-drehetra ary tsapanao taty aoriana fa tsy manana hevitra ianao? Firy ny tetikasa manandrana ny tenanao no manaraka ny doka taloha Raha tsy mandeha ny zavatra rehetra, vakio ny torolalana? Olana aza aho, rehefa avy namaky ny torolàlana. Indraindray mamaky ny dingana tsirairay aho, manaova izany araka ny fahazoako azy, ary manomboka indray aho satria tsy azoko tsara.
Mba efa nihevitra ve ianao fa efa takatrao Andriamanitra? Mahafantatra aho ary fantatro fa tsy irery aho. Matetika aho no nanana an'Andriamanitra tao anaty boaty. Nihevitra aho fa fantatro hoe iza izy ary inona no tiany hataoko. Nihevitra aho fa nahafantatra ny tokony ho endriky ny fiangonany sy ny tokony fihetsik'ity fiangonana ity.
Firy amin'ny olona - kristiana sy tsy kristiana no manana an'Andriamanitra amin'ny boaty iray? Ny fametrahana an’Andriamanitra ao anaty boaty dia midika fa mihevitra isika fa fantatsika ny sitrapony, ny toetra ary ny toetrany. Mametraka tsipìka eo an-tampon'ny boaty isika rehefa mieritreritra fa azontsika ny fomba fiasa eo amin'ny fiainantsika sy ho an'ny zanak'olombelona rehetra.
Ny mpanoratra Elyse Fitzpatrick dia nanoratra tao amin'ny bokiny Gods of the Heart: ny tsy fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny lesoka momba ny toetran'Andriamanitra dia antony lehibe roa mahatonga ...